Avy amin'ny manerantany Alemaina Aostralia Aotrisy Arzantina Belzika Brezila Danemark Eoropa Espaina Estonia Etazonia Failandy Fanjakana Mitambatra Frantsa India Indonezia Irlandy Italia Kanada Korea Atsimo Malezia Meksika Norvezy Novely zelandy Pays-Bas Portiogaly Rosia Shina Singapore Soeda Taiwan Thailand Vorontsiloza AMS (Amsterdam Exchange) ASE (NYSE Market (Amex)) ASX (Australian Stock Exchange) BER (Berlin Stock Exchange) BRU (Euronext Brussels) BSE (Bombay Stock Exchange) BTS (BATS Global Markets) BUE (Buenos Aires Stock Exchange) CNQ (CNQ) CPH (Copenhagen Stock Exchange) DOH (DOH) DUS (Dusseldorf Stock Exchange) EBS (Swiss Electronic Bourse) ENX (Euronext Derivatives) FRA (Frankfurt Stock Exchange) GER (XETRA Stock Exchange) HAM (Hamburg) HEL (Helsinki Stock Exchange) HKG (Hong Kong Stock Exchange) ICE (Ice Futures Europe) IOB (International Order Book) ISE (Irlandey) IST (Istanbul Stock Exchange) JKT (Jakarta Stock Exchange) KLS (Malaysia Exchange) KSC (Korea Stock Exchange) LIS (Euronext Lisbonne) LIT (Jiro) LSE (London Stock Exchange) MCE (Madrid Stock Exchange (Cats)) MCX (Moscow Exchange (MOEX)) MEX (Mexico Stock Exchange) MIL (Milan Stock Exchange / Borsa Italia) MUN (Munich) NAS (NASDAQ) NCM (NASDAQ) NGM (NASDAQ) NIM (NASDAQ GIDS) NMS (NASDAQ) NSI (NSE) NYQ (NYSE) NYS (NYSE) NZE (New Zealand Stock Exchange) OBB (OTC Bulletin Board Market) OSL (Oslo Bors) PAR (Euronext Paris) PCX (NYSE Arca) PNK (Pink Sheets) RIS (Ris) SAO (BOVESPA - Sao Paolo Stock Exchange) SES (Singapore Exchange) SET (Stock Exchange an'i Thailand) SHH (Shanghai Stock Exchange) SHZ (Shenzhen) STO (Stockholm Stock Exchange) STU (Stuttgart Stock Exchange) TAI (Taiwan Stock Exchange) TAL (OMX Baltic Exchange - Talinn) TOR (Toronto Stock Exchange) TWO (Taiwan OTC Exchange ) VAN (Toronto Venture Exchange) VIE (Vienna Stock Exchange) YHD (Industry)
Daty sarobidy farany
Ny isam-bolana isaky ny anjara.
Dividend dividend ▼
Ny fandaniana dividona dia ny habetsaky ny dividends isan-taona aty amin'ny vidin'ny anjara iray.
Dividianana amin'ny fizarana no iray amin'ireo loharano manan-danja indrindra amin'ny fidiram-bolan'ny mpahita. Dividiona avy amin'ny orinasa, miaraka amin'ny fitomboan'ny fizarana ny orinasa, dia mandany ny vola miditra amin'ny mpampiasa vola, manery azy hividy anjara amin'ny orinasa na hampiasa vola amin'ny orinasa.
Ny Dividianana amin'ny fizarana dia aloa araky ny fitsipi-pitondrana anatiny ao amin'ny orinasa, fa mazàna mitranga izany indray mandeha isan-taona.
Ny serivisy ataonay amin'ny allstockstoday.com dia mampiseho ny orinasa rehetra azon'ny daholobe sy ny habetsaky ny fandoavam-bola amin'ny vola azony. Ao amin'ny latabatra fizarana ankapobeny dia ho hitanao ireto manaraka ireto:
Anaran'ny orinasa izay mandoa vola
Vola arahin'ireo orinasa amin'ny fizarana fizarana
Daty fandoavam-bola farany farany
Famokarana Dividian'ireo orinasa an-tserasera anio
Ny latabatra fizarazarana amin'ny fizarana orinasa ho an'ny fampiasana dia misy sivana ao amin'ny firenena, ny fisafidianana ny vola tianao handinihana ny habetsaky ny fandoavam-bola amin'ny orinasa.
Azonao atao ny mampiditra ny anaran'ny orinasa ao amin'ny tsipika fampidirana eo ambonin'ny latabatra fizaran'ny orinasa rehetra mba hanehoana orinasa iray ny datin'ny fandoavam-bola, ny vola aloa ary ny vola ampidirina amin'ny mpampiasa vola.
Ny Dividian'ireo orinasa eo amin'ny tsenambola dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fisondrotan'ny vidin'ny tahiry ity orinasa ity satria izy ireo no mamaritra ny fidiram-bolan'ny mpampiasa vola. Ny habetsan'ny fizarana indrindra dia mampiseho ny mahasoa sy mahomby amin'ny orinasa. Fa ny fandoavam-bola dia tsy miankina amin'ny tombom-barotra ataon'ny orinasa ihany, fa amin'ny politikam-pitantanana koa. Raha te-hivoatra amin'ny fandaniany ny orinasa, dia mazàna ny fizarana no kely dia kely. Raha te-hiantoka ny fihanaky ny anjaran'ny orinasa ny orinasa noho ny fidiran'ny mpampiasa vola fanampiny dia mandoa sefo avo be izy.
Fahombiazan'ny orinasa an-tserasera - fampahalalana tena misy momba ny habetsaky ny mpamatsy vola handray na mahazo fidiram-bola amin'ny fividianana fizarana orinasa amin'ny alàlan'ny fizarana. Ny tena zava-dehibe dia ny hoe mizara vola isan-taona isan-taona ny fizarana vola.
Ny tombotsoan'ny orinasa dia miankina amin'ny datin'ny fividianana fizarana sy ny datin'ny fandoavan-dàlana. Ny fihenan'ny vanim-potoana eo amin'ny fandoavam-bola sy ny fividianana fizarana, ny fihenan'ny famerenana. Raha ny tokony ho izy dia mahasoa ny mividy ny orinasa avy hatrany alohan'ny fandoavam-bola.
Ny fandoavam-bola ataon'ireo orinasa - marika ho an'ny orinasa tsirairay isaky ny fandoavam-bola.
Izahay dia mandray fampahalalana momba ny haben'ny vola aloa amin'ny loharano misokatra ary ampidirintsika ao anaty serivisy iray izany. Ao amin'ny tranokalanay momba ny fandoavana vola dia mora ny mahita orinasa sy ny habetsahan'ny karamany, ampitahao ireo orinasa, misafidy hoe aiza ny haben'ny fandoavam-bola na ny tombom-barotra.
Daty fandoavam-bola farany indrindra
Ny datin'ny fandoavam-bola farany farany an'ny orinasa dia ny salan'asa momba ny lozisialy rehefa voaloa ny trosa.
Ny datin'ny fandoavam-bola dia misy fiantraikany lehibe amin'ny sandan'ny lanjan'ny orinasa. Matetika amin'ny alàlan'ny daty fandoavana vola amin'ny fizarana vola dia mitombo ny tahiry. Avy hatrany aorian'ny datin'ny fandefasana ny vokatra doka, dia mihena ny vidin'ny tahiry. Betsaka ireo mpamatsy vola, rehefa nahazo fizarana vola, nivarotra ny fizarana ny orinasa avy hatrany de taorian'ny datin'ny fandoavan-dàlana.
Zahao ny datin'ny fandoavam-bola amin'ny orinasa tsara. Ny orinasa sasany dia mety mandoa hetra mihoatra ny indray mandeha isan-taona, fa in-2 isan-taona na mihoatra. Araka izany dia hanana daty fandoavam-bola 2 na maromaro izy ireo mandritra ny taona lasa.
Ny vokatra amin'ny fizarana an-tserasera ankehitriny dia ny tahan'ny isan'ireo salan'isa lany isan-taona isan-taona amin'ny vidin'ny iray anjara.
Ny vokatra azo avy amin'ny orinasa an-tserasera amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo toetoetra tena manan-danja amin'ny orinasa iray ho an'ny mpampiasa vola.
Ny serivisinay "Vokatra Dividendan'ny orinasa an-tserasera" dia manangona vaovao momba ireo orinasa rehetra izay voatanisa ao amin'ny fifanakalozana tahiry ary mampiseho ny latabatra famintinana nalamina tamin'ny alàlan'ny fizarana dividend. Manokatra ny serivisy, mahita avy hatrany ireo orinasam-bola mahasoa indrindra eto an-tany isaky ny anjara.
Ny serivisinay ihany koa dia ahafahanao mahita ny vokatry ny fizarana orinasa any amin'ny tsenam-bola ary ampitahao amin'ireo orinasa ambony miaraka amin'ny vokatra avo.